Ukunduluka kweTurks kunye neCaicos kufuneka kuxelwe ngenxa ye-COVID-19
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Safety » Ukunduluka kweTurks kunye neCaicos kufuneka kuxelwe ngenxa ye-COVID-19
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zeTurks kunye neCaicos • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuhamba kweTurks kunye neCaicos
The I-Turks kunye neCaicos Islands yoMphathiswa Wezokhenketho kunye neBhodi yabakhenkethi iyaqhubeka nokusebenzisana noMphathiswa Wezempilo njengoko benciphisa Covid-19 kwiziqithi. Kananjalo, ukuhamba kweTurks kunye neCaicos kufuneka kuxelwe kwaye kuya kunyanzeliswa ngokungqongqo.
Icandelo loMphathiswa kunye neBhodi yabakhenkethi, ngemvume yoMphathiswa Wezempilo kunye neTurks kunye neCaicos Islands Government, basebenza ngokusondeleyo neProvo Air Centre kunye neBlue Heron Aviation ukuququzelela ukuhamba ngenqwelomoya kwezi ziqithi kubo nabaphi na abahlali, abanini mvume yokusebenza, kunye iindwendwe zethutyana ezikhoyo ngoku kwezi ziqithi kwaye zinqwenela ukuhamba.
Abo bahambayo kufuneka banxibelelane nayo nayiphi na kwezi arhente zilandelayo malunga neenkcukacha zenqwelo moya.
IZiko loMoya weProvo: [imeyile ikhuselwe]
Ukuhamba kweBlue Heron: [imeyile ikhuselwe]
Phatha olu lwazi lulandelayo:
Inani labantu kwiqela lakho lokuhamba
Ilizwe imvelaphi / indawo ekuyiwa kuyo
Isicelo esingentla sokuhamba kweTurks kunye neCaicos sandiselwa kubemi bawo onke amazwe kubandakanya (kodwa kungaphelelanga apho) eUnited States of America, Canada, United Kingdom, nakwiintlanga zeCaribbean.
Ngexesha lokusebenza kwazo naziphi na iinqwelomoya, zonke iiProtocol zezeMpilo zikaRhulumente ezinxulumene ne-COVID 19 ziya kunyanzeliswa ngokungqongqo.
Ngokumalunga nabasebenzi bezempilo, bona kunye namagosa ezempilo okanye nabaphi na abantu abanokuba banonxibelelwano ngqo nomntu okrokrelwa ukuba unale ntsholongwane okanye ulwelo lomzimba lomntu onjalo, xa kuvavanywa, baya kuba nokuvalelwa bodwa iintsuku ezilishumi elinesine okanye kude kube IGosa eliyiNtloko lezoNyango limisela ukuba umntu uchacha ngokupheleleyo, nokuba yeyiphi na kamva.
Ukuba ngesicelo segosa lezempilo inkundla yanelisekile ukuba umntu obekwe phantsi kovalelo yedwa ahlulekile ukuthobela lo myalelo, inkundla ingayalela ukuba abekwe yedwa ngenxa yesithuba esichaziweyo kulo myalelo kunye negosa lezempilo kwaye naliphi na ipolisa linokwenza zonke izinto eziyimfuneko ekufezekiseni lo myalelo.
Imifanekiso enesidima Ndwendwela iTurks kunye neCaicos Islands